Cusboonaysiinta Moobilka ee PUBG 1.1 Fariimaha Patch | Androidsis
Tencent ayaa ugu dambeyntii soo saartay qoraallada balastarka ee loogu talagalay cusbooneysiinta PUBG Mobile 1.1, oo ah tan lagu sii deyn doono saacado yar gudahood. Waxaa jira isbeddelo badan oo xiiso leh, horumar iyo warar.
Liiska cusbooneysiinta ayaa aad u ballaaran. Waxaa jira dib-u-habeyn hub iyo dib u habeyn weyn. Waxa kale oo jira horumarin ku saabsan qaybta amniga ee ballanqaaday inay hagaajinayaan nidaamka ladagaalanka kaneecada, iyo waxyaabo kale oo badan. Intaa waxaa sii dheer, faahfaahin badan oo ku saabsan iskaashiga ciyaarta la leh Metro Exodus ayaa la sheegay.
1 PUBG Mobile 1.1 cusbooneysiinta qoraalada
1.1 Habka cusub ee Metro Royale
1.1.1 Isku diyaari
1.1.1.1 Deegaanno cusub
1.1.1.2 Koox cusub
1.1.1.3 Caqabado cusub
1.2.0.1 Gali Metro Royale
1.2.0.2 Suuqa madow
1.2.0.3 Tirinta qalabka
1.3 Waxyaabaha cusub ee qaabka caadiga ah
1.3.0.1 Mawduuca Metro (laga bilaabo Nofeembar)
1.3.0.2 Mawduuca Bandhigga Jiilaalka (laga bilaabo Diseembar)
1.3.0.3 Dejinta waqtiyada helitaanka qaabka
1.3.0.4 Tuur hubka melee
1.3.0.5 Shayga Cusub: Spike Trap
1.3.0.6 Xakamaynta Dejinta Share
1.3.0.7 Shaqada bilaabida degdega ah
1.3.0.8 Kordhinta la dagaallanka
1.4.0.1 Astaamaha Tuurista Toosinta
1.4.0.2 Hagaajinta la dagaallanka macluumaadka
1.4.0.3 Hagaajinta qaabeynta
1.5 Waxyaabaha cusub ee amniga
1.5.0.1 Xulashada adeegaha
1.5.0.2 Xayiraadaha muuqaalka martida
1.5.0.3 Kordhinta amniga
1.6 Nidaamka cusub ee nidaamka
1.6.0.1 Xilliga PR
1.6.0.2 Rukunka RP
1.6.0.3 Guullo cusub
1.6.0.4 Soo dejiso kor u qaadista astaamaha
PUBG Mobile 1.1 cusbooneysiinta qoraalada
Waa kuwan ogeysiiska rasmiga ah ee loogu talagalay cusbooneysiinta PUBG Mobile 1.1:
Habka cusub ee Metro Royale
Laba khariidadood oo u gaar ah Erangel-ku saleysan burbur, boholo, xero burcad, iyo goobo kale ayaa sugaya in la baaro.
Baadh adduun cusub oo dhulka hoostiisa ah oo ay ka mid yihiin makaanikyo dagaal oo u gaar ah iyo baabuur tareen.
Hubka waxaa lagu qalabeyn karaa gantaalaha wax qarxa ee loo yaqaan M203, oo ku darsada awooda lagu qarxiyo cadawga qoryahaaga.
Arag cusub oo heer kul ah oo kuu fududeynaya inaad soo hesho cadaw qarsoon.
Qoriga Tikharta Cusub - Qoriga hawada ee aamusnaanta gaarka ah ee taxanaha Metro.
Hub cusub oo culus oo bixiya xitaa difaac adag iyo karti u gaar ah.
Baaxadda aragtida habeenka iyo muraayadaha indhaha.
Noocyo cusub oo kala duwan oo ah qalabka hubka lagu rakibo.
Burcad dhagar qabayaal ayaa khariidada u soo galay sidii cadaw.
Wuxuush Gaarka ah ka taxanaha Metro in hanjabaad ciyaartoyda ka hooska.
Gali Metro Royale
Taabo albaabka tareenka dhulka hoostiisa mara ee Lobby-ka si aad u gasho qolka Metro Royale game, oo ay ku jiraan nidaam gaar ah iyo astaamo, oo ay ku jiraan suuq madoow, alaabada xamuulka, boostada taliska, hawlgallada, hibada, qiimeynta, iwm
Suuqa Madow waa dukaanka Metro Royale ee gaarka ah. Ciyaartoydu halkan ayey ka iibsan karaan agab iyo qalab cusub ka hor inta aysan bilaabin ciyaar. Waxay sidoo kale ku iibin karaan alaabada ay ka keenaan Metro Royale oo loogu talagalay Metro Cash.
Alaabooyinka laga heli karo suuqa madow waxay ka duwan yihiin kuwa qaabka caadiga ah waxaana loo qaybiyaa heerar kala duwan oo tayo leh. Waxay kaloo bixisaa hub, miinooyin, iyo waxyaabo kale oo cusub oo loogu talagalay Metro Royale.
Qalabka lagu habeeyay miiska qalabka waxaa loo qaadi karaa dagaal. Markaad guul ka soo noqoto goobta dagaalka, alaabtu waxay ku noqonaysaa liiska qalabka.
Alaabada waxaa lagu keydin karaa kaydka Metro Royale. Alaabada ku keydsan alaabada Metro Royale Inventory lama keenayo goobta dagaalka lamana waayi doono haddii ciyaaryahanka laga adkaado.
Waxyaabaha aad ku qaadanayso boorsadaada ayaa noqon doona waxyaabaha kaliya ee aad ciyaarta u soo qaadan doonto, markaa xusuusnow inaad ku darto ammo kugu filan!
Alaabada ku kaydsan kaydka waa lagugu soo celin doonaa haddii aad badiso ama aad lumiso ciyaarta.
Waxyaabaha cusub ee qaabka caadiga ah
Mawduuca Metro (laga bilaabo Nofeembar)
Saldhigyada dhulka hoostiisa mara, kuwa waaweyn, iyo aagga shucaaca ayaa ka soo muuqan doona khariidadda 'Classic Erangel map'.
Aurora, oo dayactir lagu wado, ayaa ka soo muuqan doona Jasiiradda 'Spawn Island'.
2 ka mid ah 4 Khadadka Metro ayaa si aan kala sooc lahayn uga muuqan doona Erangel mar kasta. Ka soo gal iyaga saldhigyada dhulka hoostiisa mara si aad si dhakhso leh ugu soo dhowaato.
Mawduuca Bandhigga Jiilaalka (laga bilaabo Diseembar)
Mawjad qabow ayaa ku dhufatay Erangel, oo dusha sare ee badda ku daboolaysa qulqulo baraf ah. Raac iyaga si aad u hesho janada qalcadda jiilaalka, oo u muuqata si aan kala sooc lahayn, ka qaybgal dagaal barafka barafka leh oo lala yeesho asxaabta iyo barafka wakhtiga firaaqadaada.
Qabowga ka sokow, qabowga qabow ayaa sidoo kale keenay diirimaadka ciidaha. Booqo qolka xafladaha Jiilaalka iyo geed hadiyadeed oo ka soo muuqday magaalada agteeda kuna soo biir xafladaha asxaabtaada.
Dejinta waqtiyada helitaanka qaabka
Habka infekshinka iyo qaabka RaageGear ayaa loo dami doonaa si loo hagaajiyo dheeraad ah.
Habka Payload 2.0 waxaa laga heli karaa Jimce kasta, Sabti iyo Axad UTC +0.
Tuur hubka melee
Ciyaartoyda wata hubka fudud waxay hadda rogi karaan qaabka bilaabista.
Shayga Cusub: Spike Trap
Spike Traps waxay ka muuqdaan dhulka qaabka caadiga ah waxaana loo isticmaali karaa tabka la tuuri karo ka dib marka la soo qaado. Dabinada dhig dhulka si aad u daloolto taayirrada gawaarida dul marta.
Xakamaynta Dejinta Share
Koodh ayaa loo samayn karaa lana wadaagi karaa xakamaynta ciyaartoyga iyo xasaasiyaddiisa, taas oo u oggolaanaysa ciyaartoy kale inay ku celiyaan.
Shaqada bilaabida degdega ah
Mar alla markii tan loo suuro geliyo dejinta, ciyaartoydu waxay awoodi doonaan inay si dhakhso leh u bilaabaan walxaha la tuuri karo iyagoo shaashada maraya
Kordhinta la dagaallanka
Dejinta dareenka dareenka muuqaalka ee Win94 ayaa lagu daray isdhexgalka goobaha.
Kordhinta xasaasiga ugu badan ee jimicsiga ee 400.
Marka ciyaartoydu baabuur wataan, hubkooda oo qalabaysan ayaa la soo bandhigi doonaa.
Astaamaha Tuurista Toosinta
Isbedelo kala duwan ayaa lagu sameeyay astaamaha walxaha la tuuri karo.
Hagaajinta la dagaallanka macluumaadka
Saxsanaanta qalabka loo isticmaalay tusaalaha muuqaalka holografi ayaa la hagaajiyay.
La hagaajiyay waxqabadka midabka iskutallaabta ee 2 × Wareegyada iyo 3 co Wareegyada.
Calaamadda xawaaraha saadka iyo cadowga oo leh calaamadda guud ayaa lagu soo bandhigayaa minimap-ka.
Hawl lagu daray si loo habeeyo qaabka kontoroolka gawaarida. Tan waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo qaabka shaashadda hawlgalka gaariga.
Hoos udhaca xadka daahfurnaanta hoose ee badhanka ilaa 0%.
Waxyaabaha cusub ee amniga
Ciyaartoydu ma awoodi doonaan inay beddelaan server-yada marka la bilaabayo xilliga 16aad. Qalabka 'Switch Server' wuxuu u guuri doonaa shaashadda Nidaamka Nidaamka.
Ka dib markay beddelaan adeegeeda, ciyaartoydu waa inay sugaan 60 maalmood ka hor intaanay mar kale wax ka beddelin.
Xayiraadaha muuqaalka martida
Kooxda Rasmiga ah ee PUBG MOBILE waxaa ka go'an inay abuuraan jawi cayaareed caddaalad ah waxayna xaddidi doonaan astaamaha martida ee martida oo ay ka mid yihiin: Wadahadalka Dadweynaha, Madal-kooxeedka, Walaalaha Hubka, iyo Cheer Park.
Intaa waxaa sii dheer, jilayaasha ku jira koontada martida waxay awoodi doonaan oo kaliya inay gaaraan heerka ugu sarreeya ee Gold V mana ka muuqan doonaan qiimeynta hoggaanka.
Qalabka loo isticmaalay nidaamka xaqiijinta amniga ayaa la hagaajiyay si loo hagaajiyo hufnaanta xaqiijinta.
Xeeladaha ogaanshaha iyo mamnuucida adag ayaa la qaatay si loo bartilmaameedsado iibsiyada aan la fasaxin, kicinta, iyo dacaayadaha kale ee xun.
Awoodo adag si loola dagaallamo khiyaanooyinka kala duwan iyo weerarrada shabakadda.
Nidaamka cusub ee nidaamka
Iskuxirka mawduucyada 'Metro' iyo abaalmarinta
Dhacdooyinka Cusub ee Magaalada - RP Dhacdooyinka Gaarka ah Tab
Dhacdo cusub kooxda PR
Cusbooneysiinta Macaashka Macaamiisha RP
Waxtarka cusub ee rukunka RP
Kudarey guulaha Festifaalka Jiilaalka, guulaha Metro IP, iyo guulaha gaarka ah ee gaarka ah ee kaliya lagu heli karo nuqulkaan.
Soo dejiso kor u qaadista astaamaha
Qiimeynta soo dejinta ayaa la hagaajiyay si loo helo khibrad soo dejin oo ka wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dhammaan wixii ku saabsan cusbooneysiinta cusub ee PUBG Mobile 1.1: qoraalada balastar buuxa
Marka waad u codeyn kartaa barnaamijyada iyo cayaaraha ugu wanaagsan sanadka 2020
Barnaamijka Idondo wuxuu joojin doonaa shaqadiisa 31-ka Diseembar, 2020